बूढीगण्डकी : मृगतृष्णा बनेको परियोजना- फिचर - कान्तिपुर समाचार
चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा पनि ५० हजार मानिसको घरजग्गा डुबाउनेछ । आयोजनाको अनिश्चितताको भुमरीमा स्थानीयहरु फसेका छन् ।
फाल्गुन १५, २०७७ रमेश भुसाल
मझिटार, धादिङका राजु माझीले समातेका माछा ।
खास समस्या ? चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसले काम सुरु गर्ने कुनै पनि संकेत देखाएको छैन । सेप्टेम्बर २०१८ मा कुनै टेन्डर आह्वान नगरीकन यसलाई उस्को जिम्मा लगाइएको थियो। यो निर्णय त्यति बेला एकदम विवादास्पद बनेको थियो। अहिले भने यो परियोजना न यता न उताको अवस्थामा छ।
बूढीगण्डकी नदी किनारमा रहेको सबैभन्दा ठूला बस्तीमध्ये एक खहरे बजारको ड्रोनबाट खिचिएको तस्बिर । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)
भिडियो: नवीन बराल
सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको भूमिसम्बन्धी बाधा हटाउने हो । त्यसैले हामीले मुआब्जाका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं,” मुआब्जा तथा पुनर्वास इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने । “स्थानीयका घर, गोठ, रुख र अन्य मूल्यवान् संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि अर्को २० अर्ब छुट्याइएको छ,” उनले थपे ।
भूभाग डुबानमा पर्छ भनेर उनीहरूको जग्गा बेचबिखन गर्न सन् २०१३ मा सरकाले बन्देज लगाएपछि बल्ल प्रायः गाउँलेले आउँदै गरेको उथलपुथलको पहिलो छनक पाएका थिए । केही दशकदेखि द्रुत गतिमा नयाँ नयाँ सडकहरू बनिरहेका थिए, नदी बेसीहरूमा नयाँनयाँ बजारहरू बसिरहेका थिए ।पहाडबाट बेशी झर्ने क्रम तिब्र हुँदैथियो। बेशीको व्यापार बढ्दो थियो।
बाँधस्थलबाट उत्तरतर्फ ४० किमि टाढा बाटोछेउ ग्रील उध्योग चलाउँछन्, घारे गुरुङ । मलेसियामा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले उनले दुई दशकअघि गोर्खाको आर्खेत बजारमा पर्ने बाटोछेउको जग्गा किनेका थिए । उनले मुआब्जास्वरूप एक लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । “उनीहरूले अहिले हाम्रो संरचनामा १० प्रतिशत ह्रासकट्टी कटाउँछौं भनिरहेका छन् । साँच्चै त्यसो हुने हो भने मैले पैसा पाउने होइन, तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।
नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यो बाँधले प्रभावित गर्ने क्षेत्र साह्रै धेरै हो । आयोजनाले बूढीगण्डकीको ४५ किमि र आँखुखोला उपत्यकाको २२ किमि डुबाउँछ । धादिङमा पर्ने बूढीगण्डकीको सहायक नदी आँखुखोलामा बसेको सबैभन्दा ठूलो बस्ती खहरे हो भने बूढीगण्डकीको किनारमा बसेको गोर्खाको आरुघाट डुब्नेमध्यको सबैभन्दा ठुलो बजार हो।
धादिङको हेप्नेस्थित आफ्नो पसलमा ज्ञानुमाया श्रेष्ठ । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)
सहायक नदीको किनारनजिक, धादिङ जिल्लाको हेप्नेस्थित आफ्नो सानो झुपडीमा समोसा, चाउचाउ, चिया र सेलरोटी बेच्ने ज्ञानुमाया श्रेष्ठले आफ्नो व्यवसायमा दोहोरो मार परेको बताइन्।
अप्रिल २०१५ मा ७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल हल्लायो । उनको सिमेन्टको घर र गोठ भत्कायो, भैंसी, गोरु र बाख्रा मारिदियो । भूकम्पभन्दा पहिले आयोजनाका अधिकृतहरूले दुवै संरचनाको मापन गरेका थिए । “भूकम्पपछि उनीहरूले पुनर्मापन गरे । उनीहरूले पुरानो घरलाई होइन, यी नयाँ कामचलाउ संरचनाका लागि क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनेका छन्,” उनले भनिन् । तर मुआब्जा तथा पुनर्वास कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, “भूकम्पअघिको मापन पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्टका लागि गरिएको हो, क्षतिपूर्तिका लागि होइन ।”
देशभरिका धैरै भूकम्पप्रभावित समुदायले नयाँ घर बनाए तापनि यी दुई नदीका किनारमा बस्ने मानिसले बनाएका छैनन् ।
पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट दुइ किलोमिटर उत्तरमा बनाइने बाँधको १० किमि उत्तरमा पर्ने गुम्ती गाउँमा बस्छन्, कृष्ण माझी । उनी र यहाँका गाउँलेहरू दशकौंदेखि दर्ता नगरिएको भूमिमा बस्दै आएका छन् । मे २०१७ मा दर्ता नगरिएको भूमिमा बनेका संरचनालाई क्षतिपूर्ति कार्यक्रममा राख्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। तर तीन वर्षयतासम्म पनि कुनै भुक्तानी गरिएको छैन । आयोजनाका कर्मचारीले भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको बताए पनि कहिले हुन्छ भनेर निश्चित मिति दिन सकेनन् ।
कृष्णले भत्किएको आफ्नो घरको एक भागलाई भान्साकोठाका रूपमा प्रयोग गरिरहे तापनि उनले अस्थायी संरचनामा पाँच वर्ष बिताएका छन् । घरको भित्ताभरि थुप्रै चिरा छन् । “अर्को सानो भूकम्प पर्याप्त छ हामीलाई मार्न । हामीले यसलाई भत्काउन सक्दैनौं । किनकि क्षतिपूर्ति दिन अधिकारीहरू आए भने हामीले उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ,” उनले भने ।
गोर्खा र धादिङ जिल्लासँग जोडिएको बूढीगण्डकी नदी उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो बस्तीहरूमध्ये एक आरुघाट बजारको ड्रोनबाट खिचिएको तस्बिर । आयोजना बनेपछि यो बजार पूर्ण डुबानमा पर्नेछ । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)
आयोजनाका लागि स्थानीयले आफ्ना जग्गा हस्तान्तरण गरून् भनेर पुनर्वासलगायत थुप्रै वाचा गरिएका थिए । उनीहरूलाई कहाँ पुनर्वास चाहिन्छ, कस्तो सुविधा आवश्यक छ लगायतका कुरा सोधेर फारम भर्न लगाइएको थियो ।
“जलाशय वरिपरि माथि डाँडामा गाउँ बसाइनेछ, २३५ किमि रिङरोड बनाइनेछ र सबै किसिमका सुविधा दिइनेछ भनेर हामीलाई भनिएको थियो । तर अहिले उनीहरू रिङरोड होइन, लिङ्करोड बनाउने हो भनिरहेका छन् । पुनर्वास योजना ल्याउने छाँट नै छैन । यतिका वर्ष उनीहरूले हामीलाई मूर्ख बनाए,” आँखु खोलामा अवस्थित अर्को गाउँ खहरेका सुशील धरेलले भने । मुआब्जा कार्यालयका कार्कीका लागि गाउँलेको असन्तुष्टि कुनै अनौठो होइन । “धेरै मानिस खुसी छैनन्, म बुझ्छु,” उनले भने ।
“व्यवस्थामा भएको सरकारी रेटभन्दा मुआब्जा रकम धेरै गुणा बढी छ । तर हामीले चाहेको हामी गर्न सक्दैनौं किनभने नियमहरू छन्,” उनले भने । अनि थपे, “करोडौ पाउने मानिस पनि छन्, जसले काठमाडौं जस्ता सहरमा पनि घर किनेका छन् ।” तर स्थानीयको अर्कै दृष्टिकोण छ । जग्गा कारोबार अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । र, भूमिको वास्तविक मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी हुन्छ ।
केहीले मुआब्जा रकमबाट राम्रै गरेका भए तापनि अधिकांश सीमान्तकृत र गरिब समुदायका मानिसहरु भने विचल्लीमा परेका छन् । धेरै मानिसले व्यहोर्नुपरेको वास्तविक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै अधिकारीहरूले सरकारी क्षतिपूर्ति योजनाबाट लाभान्वित भएकाहरूको निरन्तर गुणगान गाइरहन्छन्, त्यसबाट उनीहरू रुष्ट छन् ।
“हाम्रो जमिनमा सिँचाइ गर्न मिल्छ । नजिकै उब्जनीका लागि बजार छ र हामी वर्षमा तीन बाली लगाउन सक्छौं । सानो जमिनले पनि पाँच/छ जनाको परिवारलाई सहज जीवन जिउन मिल्छ । आयोजनाले दिएको मुआब्जाले मैले सहरी क्षेत्रमा जग्गा किन्न सक्दिनँ, मैले त्यहाँ कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ?” खहरेकी पम्फा खड्काले रुँदै भनिन् ।
काठमाडौंका सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि कहिलेसम्म पुनर्वास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट उत्तर छैन । “बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि हामीले पुनर्वास नीति बनाएका छौं । तर समस्या, आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे कुनै स्पष्टता छैन । त्यसलाई निर्क्योल नगरीकन पुनर्वास सम्भव छैन,” जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने ।
गोर्खाको बूढीगण्डकी नदी किनारमा खेलिरहेका आफ्ना नातिनातिना हेर्दै पूर्णबहादुर आले । यो ठाउँ पानीमा डुब्नेछ । (तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)
सही तरिकाले नगरिएको पुनर्वास नीतिले सामाजिक समस्या सिर्जना गरेको छ । केहीले मनोरञ्जनमा पैसा खर्च गरेका छन् । जसको अर्थ हुन्छ, पुनर्वास गरिएन भने उनीहरू घर र जग्गाविहीन हुन्छन् । अन्य कतिले मुआब्जामा प्राप्त रकमलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न वा ऋण तिर्न, मोटरसाइकल किन्न वा आफ्ना छोराछोरीलाई विवाह गरिदिन र पढाउनमा प्रयोग गरेका छन् । “मैले एउटा सानो जमिनका लागि करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थिएँ । मैलै ११ हजार जति आफ्ना नातिनातिनामा खर्च गरें र बाँकी रकम काठमाडौंमा पढिरहेकी छोरीलाई पठाएँ,” अर्खेत गाउँका पुर्णबहादुर आले मगरले भने ।
पर्यावरणीय क्षतिलाई बेवास्ता
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टका अनुसार, जलाशयले २४०० हेक्टर वनमा ३८ प्रजातिका ३५ लाख रूख काटिने छ भने १९ स्तनपायी, ९ सरीसृप र ५४ चराका प्रजातिलाई असर पर्नेछ । तीमध्ये १५ संरक्षित प्रजातिमा सुचिकृत छन् । त्यहाँ इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर अर्थात आइ यू सी एनको रातोसूचीमा परेको पाँच ओटा माछाका प्रजाति पनि छन्, जसको बासस्थान नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको नागरिक समाजले यसमा नगण्य चासो देखाएको छ ।
“जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्य लागत समावेश गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै उल्लेखनीय आन्दोलन हुन्थ्यो, १९९० को दशकमा । त्यो अहिले मृतप्रायः छ, जसको उदाहरण बूढीगण्डकी हो,” जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितले भने । यसको साटो “पानी पारिस्थितिक, पर्यावरणीय महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई वस्तुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, विचारहरू बलिया हुँदैछन्,” उनले भने । ४४ ओटा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ, ७४ धार्मिक स्थल, २९ ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल हराउनेछन् । “तपाईंले वास्तविक र गम्भीर चासो देखाउनुभयो भने तपाईंलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । मलाई लाग्छ, यसले सबै तहमा डर स्थापित गराउन सहयोग गरेको छ । नागरिक समाज यसको सिकार भएको छ,” उनले थपे ।
डुबानमा पर्ने क्षेत्र र नदीको खण्ड देखाउने नक्सा (ग्राफिक : द थर्ड पोल)
वन संरक्षणका उपलब्धिहरूलाई उल्टाइँदै छ । ६२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको १५०० हेक्टरको सामुदायिक वन प्रभावित हुनेछन् । माझिटारको पशुपति सामुदायिक वन तीमध्ये एक हो । नदी किनारदेखि २०० मिटरमाथि भर्खरै काटिएका धेरै रुखका ठुटा सुरेश शाहले देखाए । “रोक्न खोजें भने गाउँलेहरुले भन्छन्, हामीले सबै गुमाएका छौं तपाईंलाई यी काठबारे किन पर्वाह,” उनले भने । “स्वामित्वको भावनाले वन संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । तर त्यो भावना अहिले छैन,” उनले थपे ।.
परियोजना कार्यालयका प्रबन्धक कार्कीले पर्यावरणीय मुद्दाबारे कुनै पनि प्रश्न दिन सकेनन् । उनका इन्जिनियर पनि उत्तिकै अनभिज्ञ थिए । “निर्माण सुरु भएपछि यो मुद्दालाई सुल्झाइन्छ । हामीले यसबारे सोचेका छैनौं र यसलाई कसरी सल्टाउने भनेर हामीलाई सल्लाह दिइएको छैन,” कार्कीले भने ।
जलवायु परिवर्तनले हिमनदीको पग्लाइलाई असर गरिरहेको र नदी प्रवाहलाई अनिश्चित बनाइरहेको सन्दर्भमा दीक्षितले बृहत जलविद्युत् आयोजनाहरूको महत्वलाई प्रश्न गरे, “ कुनै उचित मूल्याङ्कनबिना देश गम्भीर र खतरनाक विकासतर्फ बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”
तीन वर्षमा तीन सरकारले लगातार त्यति नै पटक निर्णय गरेर चाइना गेजुवा कर्पोेरेसनलाई ठेक्का दिने वा त्यसलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरे ।
सन् १९८४ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पाखा पारिएको यो आयोजना सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय कबुलकर्ताहरूका लागि खुला गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०११ मा यसलाई ब्युँताइएको थियो । त्यखिखेर नेपालमा प्रत्येक दिन १२ घण्टाभन्दा बढी बिजुली जान्थ्यो । फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै रुचि देखाएनन् । त्यसैले सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने निर्णय गर्‍यो । घेरलु स्रोतसाधनबाट उठाइने ठूलो बजेटको विकास प्राथमिकता थियो यो । सन् २०१६ मा बेल्जियमको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ट्राक्टाबेलले यसको विस्तृत डिजाइन सकेको थियो ।
२.५ अर्ब अमेरिकी डलर
सन् २०१५ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत नेपालको त्यो वर्षको राष्ट्रिय बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो ।
राष्ट्रिय कोष र व्यवस्थापनबाट आयोजना अगाडि बढाइने भनिएको थियो । तर त्यसपछि सन् २०१७ मा चीन एक्कासि दृश्यमा देखापर्‍यो । सरकार छाड्नुभन्दा केही दिनअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलले कुनै प्रतिस्पर्धाबिना आयोजना चाइना गेजुवा कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गर्यो ।
सन् २०१७ नोभेम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ बनेको सरकारले ठेक्का प्रदान प्रक्रियामा अनिमियतता तथा पारदर्शिताको अभाव भएको जनाउँदै उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। चार महिनापछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा अर्को सरकार बन्यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा उनले आयोजना गेजुवालाई फिर्ता गरे । तर समस्या, गेजुवाले न आयोजनामा रुचि देखाएको छ, न नेपाली सरकारले जानकारीका लागि गरेको अनुरोधको ठोस् जवाफ नै पठाएको छ ।
“अहिले आयोजनामा चिनियाँहरूको रुचि कम भएको भन्ने होइन । देशमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता भएकाले उनीहरू अलि अनुकूल समय पर्खेर बसिराखेका छन्,” जलविद्युतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठको विचारमा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चिनियाँहरूको स्वार्थ निर्माण ठेक्काबाट पैसा कमाउनेमा सीमित छ । “गङ्गा नदी वरिपरिको विशाल समतल फाँटहरूमा सिँचाइ गर्न हिमालबाट बगेर जाने पानीमा भारत निर्भर हुने भएकाले नेपालको पानीमा भारतको बढी स्वार्थ र चासो छ न कि बिजुलीमा ,” श्रेष्ठले भने ।
गण्डक नदी, जसको सहायक नदी बूढीगण्डकी हो, भारतको बिहार राज्यमा प्रवेश गरी अन्ततः गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । दुवै नेपाल र भारतले सन् १९५९ को गण्डक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो सन्धिले गण्डकको पानीमा भर पर्ने बिहारका दसौं लाख हेक्टरका खेतको पानी प्रवाहमा असर गर्ने गरी माथिल्लोतटमा गतिविधि गर्न नेपाललाई बन्देज लगाएको छ । दुई देशबीच लामो समयदेखि पानी वितरण एकदमै संवेदनशील र विवादास्पद विषय भएको छ ।
सन् २०१८ को एसिया फाउन्डेसनको को रिपोर्टअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्रदायक चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावले घर्षणहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने आंकलन गरिएको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ र माथिल्लो मादी गरी ७५ मेगावाटको संयुक्त क्षमता भएका अर्का दुई जलविद्युत् आयोजना हालसालै चिनियाँ कम्पनीहरूले बनाएका थिए । “सन् १९८० को मध्य दशकदेखि भारतको स्वामित्वमा रहेको वा भारतीय निजी कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाएका छैनन्,” रिपोर्ट भन्छ ।अहिले भने अरुण तेस्रो बन्ने क्रममा छ।
तथापि भर्खरै उदाउँदै गरेको बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित देशहरूको क्षेत्रीय उपसमूहलाई एकजुट बनाउँदै आफ्नो प्रभावको क्षेत्र बढाउने रणनीतिको अङ्गका रूपमा भारतले बिजुलीको सीमापार व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बिजुली “रणनीतिक वस्तु” भएकाले गैरबिबिआइएन विदेशी शक्तिहरू आपूर्ति शृङ्खलामा संलग्न हुन पाउँदैनन् भनेर डिसेम्बर २०१६ मा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भुटान दुवैले आपत्ति जनाएका थिए । दुवै देशसँग जलविद्युत् निर्यातमा प्रचुर सम्भावना छ ।
श्रेष्ठका विचारमा नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएको भारतले रुचाएको छैन । तर बूढीगण्डकीलाई लिएर उनीहरू धेरै खुसी छन् । किनभने पानी कम बग्ने मौसममा पनि भारतले संवद्र्धित प्रवाह पाउनेछ । “ बूढीगण्डकी जस्ता पानी भण्डारण गर्ने परियोजनाहरूमा नेपालले यस्तै धेरै गल्ती गरोस् भनेर भारत कुरेर बसिरहेको छ,” उनले भने । भारतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने वा त्यसमा लगानी गर्न आफ्नो रुचि नभएको स्पष्ट पारेको थियो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर द्विपक्षीय छलफलबाट भारत बाहिरिएको थियो ।
गलत डिजाइन ?
“आयोजना डिजाइन गर्ने क्रममा सिँचाइलाई पूर्ण नजरअन्दाज गरिएको छ,” पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीले डिजाइनको समीक्षा गर्न सरकारले बनाएको समीक्षा समितिको नेतृत्व पनि गरेका थिए ।
“तल नवलपरासी र चितवन जिल्लाका १००,००० हेक्टर जमिनहरूले लाभ उठाउन सक्थे, जुन भारतलाई खुसी बनाउने रणनीति हो जस्तो लाग्छ,” उनले भने । “सुक्खा मौसममा जलाशयबाट प्रवाह हुने पानी बग्ने होइन । यो हाम्रा भूमि डुबानमा पारेर र हाम्रो लगानीमार्फत उत्पादन हुन्छ । भारतले यो पानी प्रयोग गर्छ भने हामीले वित्तीय प्रतिफल पाउनुपर्छ,” ज्ञवालीले थपे ।
उनका अनुसार यो आयोजनाको अर्को समस्या गलत प्रकारको बाँध हो । “नेपाल जस्तो भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा यसको डिजाइनमा प्रस्ताव गरिएको सिमेन्टले बनेको दोहोरो धनुषआकारको बाँधभन्दा ढुङ्गाहरूले भरिएको बाँध उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।
धादिङको गाउँ घुम्तीस्थित आफ्नो घरमा कृष्ण माझी । सन् २०१५ को भूकम्पका कारण घरका भित्ता चिरा परेका छन् । तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)
तर बूढीगण्डकी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले भूकम्पीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी आयोजनको डिजाइन तयार पारिएको दाबी गरे ।
“अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड र भूकम्पप्रतिरोध गर्ने सक्नेगरि हामीले बाँध डिजाइन गरेका छौं । त्यस्तो केही चिन्ता गर्नुपर्दैन,” देवकोटाले भने ।
बदलिँदो बजार, बढ्दो लागत
ढिलाइका कारण बूढीगण्डकी आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य नहुने डर पनि बढ्दो छ । सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र उदाउँदो हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिको लागत घट्दो छ ।
एसिया फाउन्डेसनको रिपोर्टअनुसार, सन् २०१० मा राजस्थानको बिजुलीको प्रति युनिट मूल्य १९ युएस सेन्टबाट ३.६ युएस सेन्ट झरेको थियो । र वायु ऊर्जा ३.७ युएस सेन्ट थियो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मूल्य ७ युुएस सेन्ट प्रति युनिट पर्छ ।
नेपालको अपेक्षित ऊर्जा निर्यात बजार भारतले सन् २०२० सम्ममा ३७ गिगावाट सौर्य तथा ३८ गिगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता द्रुत गतिमा बढाउँदै छ । तर स्थानीय प्रयोगका लागि भएकाले बूढीगण्डकीको उत्पादनले क्षेत्रीय बजारमा प्रत्यक्ष सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन ।
तथापि घरेलु प्रयोगका लागि भए पनि यो आयोजनाको उपयोगिता प्राविधिक लागतहरूका कारण कम हुँदै गएको छ । “यो आयोजना पाँच वर्षभित्र विकास गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले केही पैसा जोगाउनेछौं । तर २० वर्ष लाग्यो भने यो राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूका लागि भ्रष्टाचारको अड्डा हुनेछ । लाग्छ, लागतका हिसाबले यस आयोजनाले अहिले नै आफ्नो प्राविधिक ताकत गुमाइसकेको छ,” ऊर्जा विशेषज्ञ दीपेन्द्र भट्टराईले भने।
यो आयोजनालाई पुनर्जीवित गर्न नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई बाध्य पार्ने दैनिक बिजुली कटौटी अन्ततः हटेको छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा उत्पादन सन् २०१० मा ७०० मेगावाटदेखि सन् २०१४ मा दोब्बर गर्यो । आउँदो दुई वर्षमा अरु ७०० मेगावाट बिजुली थपिँने संभावना छ । तर सुक्खा, जाडोको मौसम (नोभेम्भबरदेखि अप्रिलसम्म) मा पानीको सतह कम हुने भएकाले बहावमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनाले अधिकतम क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले भारतबाट झण्डै६०० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यो उर्जा आपूर्ति गर्नु नै ठूलो जलाशय बनाउन खोज्नुको मुख्य उदेश्य हो।
सन् २०२२ सम्ममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सकिनुपर्ने हो । सन् २०१५ मा आयोजनाको अनुमानित लागत २.५ अर्ब युएस डलर थियो, जुन त्यो वर्षको नेपालको बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो ।
“जम्मा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति दर मान्ने हो भने पनि गत चार वर्षमा हामीले आधा अर्ब अमेरिकी डलर गुमाइसकेका छौं । ढिला गरिएको चार वर्षमा हामीले अर्को डेढ अर्ब अमेरिकन डलर प्राप्त गर्न सक्थ्यौं । अहिलेको ढिलाइले हामी पहिल्यैदेखि नै कुल आयोजना लागत रकममा घाटामा परिसक्यौ ,” लक्ष्मी देवकोटाले भने ।
- यो सामग्री द थर्ड पोल नेटका लागि रमेश भुसालले तयार पारेका हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ १०:०७
पहिलो शतकको दुई दशक
फेब्रुअरी १९, २००१ का दिन मुनिकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक बनाए । योसँगै उनी नेपालका लागि पहिलो शतक बनाउने खेलाडीमा दरिए ।
फाल्गुन १५, २०७७ विनोद पाण्डे
काठमाडौँ — मुनिक श्रेष्ठलाई सम्झिन अलिक पछाडि नै फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको रातो बल र सेतो पोसाकले प्रभुत्व जमाएको समयतिर । अहिले सेतो बल र रंगीन पोसाकको समय छ । पिन्क बल परीक्षणकालमै जस्तो छ । त्यस बाबजुद रातो बल र सेतो पोसाकलाई क्रिकेटको आयामका रूपमा लिइन्छ ।
त्यही रातो बल र सेतो पोसाकमा मुनिकले नेपाली क्रिकेटमा नयाँ आयाम थपेको पनि २० वर्ष भइसक्यो । फेब्रुअरी १९, २००१ का दिन मुनिकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक बनाए । जुन शतक नेपालका लागि पहिलो थियो । उनी पहिलो शतक बनाउने खेलाडीमा दरिए । बंगलादेशको ढाकास्थित जहाँगिनगर युनिभर्सिटी मैदानमा मुनिकले शतकपछि ब्याट उठाएको समयले २० वर्ष नाघेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेकेको ५ वर्षपछि नेपालको पहिलो शतक सम्भव भएको थियो । मुनिकको शतक त्यतिबेला सम्भव भयो, जतिबेला नेपाली खेलाडीलाई अर्धशतक बनाउन नै धौधौ थियो । पवन अग्रवाल, किरण अग्रवाल, दीपेन्द्र चौधरीले खेलेका इनिङ्समा यदाकदा अन्तर्राष्ट्रिय अर्धशतक बनेका थिए । किरण ‘नर्भस नाइटिज’ भएको एक वर्षपछि मुनिकले तीन अंक स्कोरको इतिहास रचेका थिए ।
मुनिक भर्खर १५ वर्षका मात्र थिए । दाइहरू मोनिष र मोनिरको सिको गर्दै उनी क्रिकेटमा आएका थिए । छोटो समयमै प्रभाव देखाएपछि मुनिकले नेपालको उमेर समूह टिमबाट खेल्न थालिसकेका थिए । एसीसी यू–१७ एसिया कप खेल्न बंगलादेश जाँदा उनलाई पढाइबाट ध्यान बाहिर लान गाह्रो भइरहेको थियो । क्रिकेटमा आफू अझ कस्तो खेलाडी भनेर बुझ्न खोज्दै गर्दा मुनिक यू–१७ एसिया कप खेल्न ढाका पुगेका थिए । नेपालको उमेर समूहमा उनको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो ।
नेपालका पाकिस्तानी प्रशिक्षक अल्ताफ बलुचले मुनिकलाई फ्याट्ट भनिदिए ‘यू मोस्ट स्कोर सेन्चुरी ।’ नेपाल समूह चरणमा सिंगापुरसँग आफ्नो अन्तिम खेल खेल्दै थियो । अघिल्लो दिन प्रतियोगिताको अफिसियल डिनर कार्यक्रम थियो । त्यहीं बलुचले सिंगापुरसँगको खेल केन्द्रित गरेर ‘मुनिकलाई शतक प्रहार गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । बलुचको त्यही भनाइपछि मुनिकलाई आफ्नो आत्मविश्वास एकाएक बढेर आएजस्तो भयो ।
मुनिकमाथि बलुचले विश्वास देखाउनुको कारण उनको प्रतिभा त छँदै थियो । अर्को प्रतियोगिताको अघिल्लो तीन खेलमा उनको प्रदर्शन सुधारिँदै आएको थियो । बंगलादेशसँग ८ रन बनाएका मुनिकले पाकिस्तानविरुद्ध नेपालले ठूलो चुनौती तेर्स्याउँदा २५ रन जोडेका थिए । उनी कुवेतसँग ४३ रनमा रनआउट भए । तर खेलका म्यान अफ द म्याच चुनिएका थिए । कुवेतसँगको त्यो रनआउट भएको क्षण २० वर्षपछि सम्झँदा उनी विस्मात मान्छन् । उनलाई अर्धशतक बनाउँछु भन्ने त पूर्ण विश्वास थियो अनि शतकको जोश बलुचले थपिदिएका थिए ।
भोलिको खेलमा अर्धशतक बनाउनुपर्छ, टिम मिटिङमा बनेको रणनीतिअनुसार पहिला ब्याटिङ गरेमा ४५ ओभर पूरै खेलेर २ सय ७० को आसपास रन बटुल्ने, त्यसमा ओपनिङ जोडीले १५ ओभर टिकेर खेल्ने भनेर प्रशिक्षक बलुचको रणनीतिअनुरुप खेल्ने कुरा मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै मुनिक निदाइसकेका थिए । भोलिपल्ट बिहान ६ बजे टिमको अलार्म घण्टी आउनुअघि नै उनी उठिसकेका थिए । साढे ६ बजे ब्रेकफास्ट खाएर नेपाली टोली सिंगापुरसँग खेल्न मैदान लागेको थियो । टिम बसेको होटल पूर्वाणीबाट जहाँगिनगर विश्वविद्यालय मैदानको यात्रा ३० किलोमिटर दूरीमा थियो । सवा एक घण्टाको यात्रापछि नेपाली टोली ८.२० मा मैदान पुग्यो । एक घण्टाभित्र नेपाली टोलीले खेल सुरु हुनुअघिको सबै प्रशिक्षण सकाइसकेको थियो ।
मुनिकको रूममेट थिए शक्ति गौचन । शक्तिले त्यसै पनि उनलाई जोस्याइरहेका हुन्थे । आफ्नो तुलनामा शक्तिलाई निकै शान्त स्वभावका पाएका थिए मुनिकले । कप्तान भएर होला शक्ति कम बोलेको आँकलन उनको थियो । नेपाली टोलीको रणनीतिअनुसार नै शक्तिले टस जितेपछि ब्याटिङको निर्णय लिए । ‘मेरो स्कोर ७ रन भएको समयमा मैले युइन (सिंगापुर बलर) को बलमा चौका प्रहार गरेको थिएँ, अघिल्लो खेलमा रनआउट भएकाले उक्त बाउन्ड्रीपछि त पूरै ओभर खेलौंला भन्ने आत्मविश्वास बढेर आयो,’ मुनिक २० वर्षअघिको शतकीय इनिङ्स सम्झिँदै थिए, ‘४० देखि ४५ रनमा खेलिरहेको बेला फेरि रनआउट हुने डरले केही अत्तालिएको थिएँ ।’
अर्धशतक बनाएपछि ५५ रनसम्म पुग्दा सबै सिंगल रन लिएको सम्झन्छन् । त्यसपछि भने १६ बलको अन्तरमा ६ चौका प्रहार गर्दै उनी ८० रनमा पुगिसकेका थिए । अनि मुनिकलाई बलुचले ‘यू मोस्ट स्कोर सेन्चुरी’ भनेको अर्थ थाहा हुन लाग्यो । पेट दुखेकाले उनका रनरका रूपमा दीपेश खत्री क्रिजमा थिए । मुनिक त्यसपछि ९० रनसम्म पुग्दा पूरै रक्षात्मक भएर खेल्न लागे । उनी यसबीचमा एक चौकामात्र प्रहार गरे । राजा जैदीलाई चौका प्रहार गर्दै ९८ रनमा पुगे । ४१ औं ओभर फाल्न युईन आएका थिए ।
‘मन्जित दाइ (श्रेष्ठ) ले पहिलो बलमै एक रन लिँदै मलाई स्ट्राइक दिनुभयो । युईनलाई खेलको तेस्रो ओभरमा चौका प्रहार गरिसकेकाले मलाई शतक टाढा जस्तो लागेन । दोस्रो बल हाफ भलीमा थियो । मैले फिल्डरहरूलाई कुनै मौका नदिई कभरमा चौका प्रहार गरेर शतक बनाउन सफल भएँ,’ मुनिकले शतक बनाएको क्षण स्मरण गरें, ‘शतक बनाएपछि मैले ब्याट सामान्य हिसाबले नै उठाएको थिएँ । दीपेश दाइले यो नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक भएकाले यस्तो रमाइलो र ऐतिहासिक क्षण जीवनमा कमै आउने हुनाले ब्याट अझै उचालेर राख्नु भन्नुभयो । मलाई यो भनाइले भावुक बनायो र एकछिन आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो ।’
शतक बनाउनेक्रममा प्रहार गरेको बाउन्ड्री मुनिकको इनिङ्सको १३ औं चौका थियो । त्यसक्रममा उनले १ सय ७० मिनेट क्रिजमा बिताउँदै १ सय २५ बल खेलिसकेका थिए । शतकपछि थाकिसकेकाले कमै स्ट्राइक लिएको उनी सम्झन्छन् । शतकसँगै मुनिकलाई टिमको स्कोरले खुसी तुल्यायो । मुनिकको अविजित १ सय १३ रनमा नेपालले ६ विकेट गुमाई २ सय ९५ रन बनाएको थियो । प्रशिक्षक बलुचले दिएको लक्ष्यभन्दा नेपाली ब्याट्सम्यानले राम्रो खेलेका थिए ।
नेपालले खेल जित्न धेरै कुर्नुपरेन । इरफान सिद्दिकीले ४ विकेट लिएपछि सिंगापुर २१ ओभरभित्र ७१ रनमा अलआउट भयो । २ सय २४ रनको जित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा ठूलो थियो । सेमिफाइनल पुग्न नसके पनि नेपालका लागि मुनिकको शतक र अन्तिम दुई खेलको जित विशेष बनेको थियो ।
नेपालले सन् २००० मा गरेको पाकिस्तान भ्रमण मुनिकको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो । त्यहाँ उनले खासै राम्रो गर्न सकेका थिएनन्, न त नेपालको प्रदर्शन नै राम्रो भएको थियो । ‘पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता स्तरीय टोलीसँग खेल्दा हामीले धेरै सिक्न पाएका थियौं । यो हामीलाई अनुभव भएको थियो । त्यसपछि हामीले राम्रो तयारी गर्नैपर्छ भन्ने भयो । साथीहरू सागर पन्त, शरद भेषावकर, अभय राणा मिलेर आफैंआफैं खेलिरहेका हुन्थ्यौं । हामीले राम्रो तयारी गर्दै गएका थियौं । मेरो खेल पनि त्यहीअनुसार सुध्रिएको थियो,’ मुनिकले सुनाए ।
त्यसपछि आफ्नो खेल अझ सुध्रिएको उनी मान्छन् । ‘बंगलादेशसँग हाम्रो खेल राम्रो भयो । पाकिस्तानलाई हामीले ठूलो चुनौती दिन सक्यौं । सलमान बट पाकिस्तानी कप्तान थिए । हाम्रो खेलबाट प्रभावित भएर नजिक आएर उनले कुरा गर्न थालेका थिए । कुवेतसँग मैले राम्रो गरेको हुनाले प्रशिक्षकले मलाई शतक हान्नुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ मुनिकले सम्झिए, ‘सिंगापुरसँग हाम्रो राम्रोसँग सुरुआत भएको थियो । आउटफिल्ड निकै फास्ट थियो, ब्याटमा राम्रोसँग लाग्यो भने बल सिधै बाउन्ड्रीलाइन पुग्थ्यो । कभर ड्राइभ राम्रो भएको थियो । साथीहरूसँग खेल्दा यही शट ट्राइ गरेको थिएँ । २०–२२ रनमा एउटा लाइफ पाएको थिएँ, क्याच सजिलो त थिएन । प्वाइन्टमा डाइभ हान्नुपर्ने खालको थियो ।’
पेभेलियन फर्किंदा सबै खुसी हँॅदै मुनिकलाई ‘वेलडन’ भनिरहेका थिए । ‘इनिङ्स सकिएर गएपछि लन्च ब्रेकमा सबैले मलाई बधाई दिए, नेपालबाट पहिलो शतक हान्यौं भनेर । शतक बनाउनुअघिको समयमा दौडिन सकेको थिइनँ । रनर राख्नुपरेको थियो । पेट दुखेको हो कि क्र्याम्प भएको अहिले मैले सम्झिन सकिनँ,’ मुनिक शतकीय क्षण स्मरण गर्दै थिए, ‘९० को स्कोरमा पुगेपछि दबाबले होला मेरो खेल केही स्लो भयो । विश्वविद्यालयको मैदान, स्ट्यान्ड नभए पनि पालभित्र दर्शक राम्रै देखिएको थियो ।’
मुनिकको परिवार नै शतकमय थियो । उनका माहिला दाइ मोनिरले २००० मा दिल्लीमा लाला हरिराम क्रिकेट प्रतियोगितामा आसाम टोलीविरुद्ध १ सय २३ रन बनाएका थिए । मोनिर १९९८ मा काठमाडौंमा भएको एसीसी ट्रफीमा नेपाली टोलीका सदस्य थिए । ठूलो दाइ मोनिष घरेलु क्रिकेटका स्थापित खेलाडी थिए । शतक उनको वरिपरि घुमिरहन्थ्यो । बंगलादेशमा बनाएको त्यही शतकपछि मोनिक सिधै क्यानडा आईसीसी ट्रफी खेल्न जाने नेपाली टोलीमा परेका थिए । उनले जय ट्रफी पनि खेलेका थिएनन्, जुन छनोट आधार मानिएको प्रतियोगिता थियो । मुनिकलाई प्रशिक्षक बलुचले सोझै राष्ट्रिय टोलीमा तानेका थिए । मुनिक राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै नखेली नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने पहिलो खेलाडी पनि हुन् । संयोगले त्यही राष्ट्रिय टोलीबाट नै उनको पहिलो र अन्तिम भ्रमण बन्यो ।
बंगलादेश एसीसी यू–१७ एसिया कप खेल्न जाँदा मुनिकको १० कक्षाको टेस्ट परीक्षा छुटेको थियो । बंगलादेशबाट फर्किएपछि उनको स्कुल सिद्धार्थ वनस्थलीले छुट्टै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो । नेपालले २००१ मा एसीसी यू–१९ कप आयोजना गर्दै थियो । मुनिक त्यसको क्याम्पमा त थिए । भर्खर हिमालयन ह्वाइटहाउसमा प्लस टु पढाइ सुरु भइसकेकाले उनले निवेदन दिएर क्याम्प छोडे । उनले खेल्नै छाडेका चाहिँ थिएनन् । स्कुल र कलेजका प्रतियोगिता खेलिरहेका थिए । पढाइ उनको मुख्य रोजाइ भयो । त्यसपछि मात्र क्रिकेट । उनी पढाइमै केन्द्रित हुन थाले । तत्कालीन प्रशिक्षक रोय डायसले उनलाई क्रिकेट खेलिराख्नु भनेर सम्झाएका थिए ।
घरेलु प्रतियोगितामा भने उनी यंगाल क्लब, महावीर क्लब, यती एयरलाइन्स, सिर्जनशीलबाट खेलिरहेका थिए । उनले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न २००४ को आईसीसी यू–१९ विश्वकप कुर्नुपर्‍यो । बंगलादेशमा उनी नेपाली टोलीको मुख्य आशा बनेर गएका थिए । तर हातको औंलामा चोट लागेपछि उनी बीचैमा फर्किनुपरेको थियो । उनको स्थान लिन प्रेम चौधरी ढाका उडेका थिए ।
अध्ययनका लागि त्यही वर्ष मुनिक अमेरिका लागे । तर अमेरिकामा पनि उनको क्रिकेट प्यासन रोकिएन । कलेज नै परिवर्तन गरे । २००९ सम्म खेले नियमित । वासिङटन क्रिकेट लिग खेल्थे उनी । २०१० पछि क्रिकेटबाट छुट्टिन थाले । यद्यपि वर्षको एकपल्ट हुने कलेज प्रतियोगितामा उनी अहिले पनि सहभागिता जनाउँछन् । फिजिक्समा पीएचडी सिध्याएका उनले पोस्ट डक्टरल रिसर्च गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीमा यही विषय उनलाई काम लागेको छ । अहिले पनि उनी नेपाली क्रिकेटलाई पछ्याइरहन्छन् । गत वर्ष नेपाल आउँदा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा श्रीलंकासँगको खेल कीर्तिपुरमै गएर हेरेका थिए । विश्व ट्वान्टी–२० को सफलता, एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबैको चासोसाथ अपडेट लिइरहेको उनी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘नेपाल ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटमा पुगेको अमेरिकामा राति २–३ बजेसम्म बसेर हेरेको थिएँ ।’
मुनिकको शतकयता नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा २३ शतक बनिसकेको छ । राजु खड्काले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो शतक बनाए । परेश लोहनीले तीनदिवसीयमा दुई शतक बनाएका छन् । पारस खड्का ५ शतक बनाउने एक्लो खेलाडी हुन् । रित गौतमले उमेर समूहमा दुई शतक बनाउने कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन् । यी सबैभन्दा मुनिकको शतक फरक छ । किनभने उनको शतक नेपालको आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ ०९:११